Semalt समीक्षा - एक सजिलो यूआरएल स्क्रैपर
हामी सबै सहमत हुन सक्छौं कि ट्राफिक कुनै पनि वेबसाइटको विकासको लागि प्राथमिक चालक हो, अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्दा तपाईंको साइटलाई अधिक प्रख्यात जनसंख्यामा पर्दाफाश गर्दछ। यस्तो ट्राफिक प्राप्त गर्न लगानी गर्नको लागि तपाईलाई विस्तृत योजना चाहिन्छ जसमा सीपीभी ट्राफिक अभियानहरू समावेश छन्। केवल समस्या: तपाईंले सयौं स collect्कलन गर्नुपर्नेछ यदि शीर्ष खोजी ईन्जिनहरूबाट हजारौं यूआरएलहरू होइन।
जबकि यो लि man्कहरू म्यानुअली प्रतिलिपि गर्न सम्भव छ, यसले धेरै समय र ऊर्जा लिने छ। यो जहाँ सजिलो यूआरएल स्क्रैपर चित्रमा आउँदछ। यो उपकरण जुन उच्च ट्राफिक एकेडेमी २.० सुइटमा फेला पार्न सकिन्छ तपाईको कामलाई सजिलो बनाउँदछ।
सजिलो यूआरएल स्क्र्यापर प्रकार्यहरू अन्य स्क्र्यापि tool उपकरणहरू जस्तै: त्यसमा, यो वेब मार्फत क्रल हुन्छ र विशिष्ट डाटा स .्कलन गर्दछ। तर त्यसो भए खोज ईन्जिनबाट युआरएलहरू ल्याउँदा असंख्य प्रविष्टिहरू आवाश्यक हुन्छ। यो समस्या समाधान गर्न, उपकरण समान कुञ्जी शब्दहरूको साथ वेबसाइटहरू खोजी गर्न तपाइँलाई खोजी गर्न कुञ्जी शब्दहरूमा भर पर्छ।
मलाई किन सजिलो यूआरएल स्क्रैपर चाहिन्छ?
ठिक छ, यसले तपाईलाई सयौं घण्टा बचाउँछ र सर्च इन्जिनलाई मैन्युअल रूपमा सर्फ गर्नु पर्ने तनावबाट। उपकरणले स्वचालित रूपमा युआरएलहरूको विश्लेषण गर्दछ र केवल कुञ्जी प्रासंगिक प्रासंगिक आउटपुट दिन्छ।
Easy URL Scraper कसरी प्रयोग गर्ने
इन्टरफेस खोल्दा तपाईले "कीवर्ड" विन्डो देख्नुहुनेछ जहाँ तपाईले खोज्न चाहानु भएको निर्दिष्ट वेब पृष्ठहरूका लागि कुञ्जी शब्द टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तल त्यहाँ खोज ईन्जिनहरू चयन गर्नका लागि अर्को स्तम्भ छ जुन URL स collect्कलन गर्न चाहन्छ। यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाईं उत्तम परिणामहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने सधैं सबै शीर्ष खोज इञ्जिनहरूलाई मार्क गर्न सम्झनुहोस्। तेस्रो फलकले तपाईंलाई सs्कलन गर्न चाहेको यूआरएलहरूको संख्या चयन गर्न अनुमति दिनेछ। यो संख्या तपाईंको ट्राफिक अभियानको आकारमा निर्भर गर्दछ।
जब तपाईं माथिको तीन चरणहरू कन्फिगर गरेर सक्नुहुनेछ, "ग्रब यूआरएलहरू" मा क्लिक गर्नुहोस्। उपकरण स्वचालित रूपमा खोजी चलाउनेछ र आउटपुट विन्डोमा URLs प्रदर्शन गर्न सुरू गर्दछ। परिणामहरू सजिलो प्रतिलिपि गर्न र अन्यत्र टाँस्नको लागि पाठ फारममा हुनेछ।
सजिलो यूआरएल स्क्रैपर प्रयोग गरेर के फाइदा हुन्छ?
१. यदि तपाईं ईन्टरनेट मार्केटर हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको लागि उपकरण हो, यसले सीपीभी अभियानहरूमा प्रयोग गर्न लिंकहरू लिनको कार्यलाई सजिलो बनाउँदछ।
२. यदि तपाइँ एचटीए २.०० पेनी ट्राफिक लागू गर्नुहुन्छ भने, यसले तपाइँ लक्षित ट्राफिक प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ।
Other. अन्य उपकरणहरू जस्तो यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, यसैले कुनै पनि कोडिंग ज्ञान आवश्यक छैन; साधारण निर्माणको कारण तपाईलाई मेनूको वरिपरि घुम्न कुनै समस्या हुने छैन।
The. उपकरणले तपाईलाई विश्वसनीय परिणाम दिनेछ, तपाईले आफैंले युआरएलहरू खोज्नु पर्ने बित्तिकै अनुमान गर्नै पर्दैन, र यो उपकरण स्वचालित रूपमा तपाईका लागि उत्तम फिट परिणाम ल्याउनेछ।
Due. स्क्र्यापरले सबै शीर्ष खोज इञ्जिनहरूका परिणामहरू संकलन गरेको तथ्यले गर्दा त्यहाँ असंख्य डुप्लिकेटहरू हुनेछन्। जबकि यो सौदा गर्न केहि हदसम्म कष्टप्रद हुन सक्छ, त्यहाँ अनलाइन उपकरणहरू छन् जुन तपाइँको अन्तिम परिणामहरूबाट त्यस्तो नक्कलहरू पहिचान गर्न र हटाउन सक्छ।